- पवन ढुंगाना
शहरको ठिक बिचमा चिटिक्क परेर उभिएको छ, एउटा बाटुलो घर । घरभित्र सजिएका छन् आलिशान सजावटहरू । कुनामा भित्ताभरीको दराज छ । सुकिला पुस्तकहरू दराज भरी मज्जाले हाँसिरहेका छन् ।
के छैन त्यहाँ ? मार्क्सका पुँजी छैन कि इतिहासको ठेली! कुरान, गीता, वेद , र बाइबल पनि लहरै सजिएका छ्न् । दुई थान कम्युनिस्ट घोषणापत्र खिस्रीक्क मुख बाउँदै छन् । इलियड , ओडिसीदेखि लक्ष्मी कवितासंग्रह सबै देखिन्छन्, लाग्छ कविताको ठुलै पारखी हो ऊ । शेक्स्पियरको `ह्यम्लेट´ र बुद्दिसागरको 'कर्णाली ब्लुज´ ले एकअर्कालाई गिज्ज्याइरहेका छन् । पुस्तक पनि कति थरी !! साहित्य, दर्शन , राजनीती, ईतिहास , विज्ञान... ओह्हो, आँखा तिरीमिरी भैसक्यो, किताब सक्किन्नन् । यता ऊ मेरा लोभलाग्दो हेराईले गमक्क परेको छ, उसका आँखामा बडो गर्व देखिन्छ । मानौँ, वर्षौँदेखि पुस्तकहरू अभिजातको सौन्दर्यको गाना गाइरहेका छन् ।
दराजको तल्लो घेरामा देखिएका छन् हरेक पार्टीका विधानसंग्रहहरू पनि । आबुई! के हो त्यो? ए ! एक थान अलग अलग पार्टीका विशिष्ट सदस्यतापत्र रहेछन् । नहोस् पनि कसरी, उसलाई के छ र, ऊ सर्वज्ञाता हो । उसको त सिद्धान्त पनि जता ततै मिलिहाल्ने , कति मज्जा ।
चिट्टिक्कको पावरदार चश्मा ढल्काउदै घरी घरी ऊ अनेक थान किताब पल्टाउँछ । दुई तीन पाना हेर्छ । बडो ठाँटले पढ्छ । खित्त हाँस्छ । फेरि पढेजस्तो गर्छ । "के के लेख्छन् फलानो पनि , हाहा!" गर्दै उ पुस्तकका लेखकसङ्गको सामिप्यता र शक्तिढोङ देखाइरहन्छ । उसका घर पुग्ने सबलाई ऊ उसका संसार बदल्ने नियम सिकाउँछ, उस्तै परे यी हेर फलानो पुस्तकमा यस्तो छ पनि भन्छ ।
म हरिलठ्ठक त्यस्तो महान् अभिजातको पुस्तकालय जाने आँट पो कसरी गरेँ ? ओह्हो मैले अपराध गरिसकेँ । (मस्तिष्कमा नारायण गोपालको आवाज बज्न थाल्यो)
जीवनदेखि धेरै धेरै नै थाकेर
म मुर्दा भएको तिमी आज हेर ... ।।।